၁၈နှစ်အရွယ် အလှမယ်ကို ၁၄ဦးမြောက်ဇနီးအဖြစ် ဆွာဇီလန်ဘုရင် ရွေးချယ် ~ The ICT.com.mm Blog
၁၈နှစ်အရွယ် အလှမယ်ကို ၁၄ဦးမြောက်ဇနီးအဖြစ် ဆွာဇီလန်ဘုရင် ရွေးချယ်
များစွာဝေဖန် ခံနေရသည့် ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ဘုရင်အမ်ဆွာတီ (၃)က ၄င်း၏ ၁၄ယောက်မြောက် ဇနီးအဖြစ် အသက် ၁၈နှစ်အရွယ် ပြိုင်ပွဲ၀င် အလှမယ်လေးတစ်ဦးကို ရွေးချယ်ထားကြောင်း နန်းတော်ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ကျွန်တော် အတည်ပြုနိုင်တာကတော့ သူနဲ့စေ့စပ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးအမည်နဲ့ နိုင်ငံကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ”ဟု လတ်ဒ်ဇစ်ဇီ နန်းတော် အုပ်ချူပ်ရေးမှူး တင်မသီအမ်တက်တွားက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆာဟာရအောက်ပိုင်း အာဖရိက၏ နောက်ဆုံးသက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင် အသက် ၄၅နှစ်အရွယ်ရှိ အမ်ဆွာတီသည် သီတင်းပတ် အကုန်က Reed Dance ကျူရိုးနီအကပွဲတွင် ဆင်းဒစ်စဝါဒီလာမီနီနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ဟု အမ်တက်တွားက အေအက်ဖ်ပီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမသည် တော်၀င်သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ၄င်း၏ဦးခေါင်းတွင် ကျူရိုးများ ၀တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်နှင့် စေ့စပ်ထားသည့် အမျိုးသမီးငယ်သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကမှ အမ်ဘာဘိန်းရှိ စိန့်ဖရန်စစ် အထက်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ပြီး Miss Cultural Heritage အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူ၏ အမည်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် ကြေညာမည်ဟု ဆိုသည်။
တောင်ပေါများသော ဘုရင်ပိုင်နိုင်ငံလေး၏ ၁ ဒဿမ ၂သန်းသော ပြည်သူများစွာ စား၀တ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရစဉ် အိမ်တော်၏ အသုံးအစွဲ လက်ဖွာမှုကြောင့် ဘုရင်များ ဝေဖန်ခံနေရသည်။ ပြည်သူရာခိုင်နှုန်း ၇၀မှာ ဆင်းရဲမှုမျဉ်းအောက် ရုန်းကန်နေကြရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ဘုရင်၏ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ခန့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ရန်ကိုလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆန့်ကျင်နေသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများကို ပိတ်ပင်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုလည်း ရိုးရာအစဉ်အလာ ခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတုအယောင်သာ ဖြစ်သည်ဟု ေ၀ဖန်သူများက ဆိုသည်။
Newer ပါရှန်းကြောင်အား အာကာသသို့ အီရန်စေလွှတ်မည်
Older ၂၀၀၈မော်ဒယ် အထက်ကား တင်သွင်း ရောင်းချခွင့် ကုမ္ပဏီ ၄၀သာ ရရှိ
16 thoughts on “၁၈နှစ်အရွယ် အလှမယ်ကို ၁၄ဦးမြောက်ဇနီးအဖြစ် ဆွာဇီလန်ဘုရင် ရွေးချယ်”
Ba Nyar Win says:
Tin Mg Mg Htwe says:
D Bell Gyii taw taw myarr nay pi naw …..
Tolwak Shifraw says:
Kachinlay Jesse says:
ဖိုး ဥာဏ္ says:
ေယာက်ာၤးဆိုတာ နွာဘူးနဲ့ ဂန္ဒူး ပဲရွိတာ……………………..ဒီဘဲၾကီး ဘူးပံုကေတာ့………………………….တဏာရူးေတာင္…….အရွံူးေပးရမယ္………
Phyo Naykha says:
ငါ့ယီး.. :3 ဘုရင္တဲ့ ရုပ္ကိုက ၾကည္ညိဳစရာၾကီး :3
Kunghtat Aung says:
Wai Yan Htat says:
Pe Kaung says:
Hein Tayzar says:
ဘုရင္ေတြမ်ား မိဖုရားေတြေသာက္ေသာက္လဲယူ။ ကေလးေတြတန္းစီေမြး။ မိဖုရားအခ်င္းခ်င္းရန္ၿဖစ္.. ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြၾကီးလာေတာ့ နန္းလု.. အရွုပ္ေတာ္ပံုေတြ :/
21st century yout nay par p byar..ae lout tot ma lote lout tot bar buu..
Joseph John John says:
What the Fuck kings,take marriage >>???She look like his grand daughter.What the Mother fucker KING????
စပ္စလူး စိန္ says:
မင္း တို. ေခတ္ ဘဲ လုပ္ ေပါ. ကြာ ……
Nay Gyi says:
ဒို႔ မင္းတုန္းမင္းကိုအမီလိုက္ေနတာထင္တယ္.. ႀကိဳးစားပါအံုး. 😛